China MZF Magnetic Drive Pump mpanamboatra sy mpamatsy | damei kingmech pump
Size: DN25 ~ DN400
Fahafahana: ~ 2000m3 / h
Loha: ~ 250mTemperature: latsaky ny 250 ℃
Pressure: 2.5MPa ~ 10MPa
Hery: ~ 560kW
Fitaovana: vy vy, vy tsy misy fangarony 304/316/321 / 316Ti / 904L, Duplex, Hastelloy, firaka Titanium ary Titanium sns.
1.Fandraisana anjara tokana tokana, overhUng firafitra
2.MZF paompy andriamby dia karazana paompy centrifugal izay tsy misy tombo-kase, tsy misy famoahana tanteraka, ary entina amin'ny alàlan'ny fametahana andriamby, ary an'ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana tarihin'ny andriamby.
3. Izy io dia mandray ny fivezivezena anatiny mba hamandoana sy hampangatsiaka ny fitambarana andriamby ary ny fitondra mihetsiketsika. Ny fivezivezena anatiny dia misy fivezivezena anaty tosidra ambony sy ny fihenan'ny tsindry ambany. Ny paompy mampihetsi-po ao anatiny dia mety amin'ny mpanelanelana izay mora amin'ny etona, ny paompy mampihetsi-po ao anatiny dia mety amin'ny mpanelanelana izay tsy easy ho an'ny etona.
4.Pompana ranoka mampidi-doza no hamatsiana fitaovana miaraka amin'ny avo roa heny containment akorandriaka, Hampiahiahy izany rehefa miparitaka ny akorany fitoerany voalohany.
5.Ny palitao fanafanana sy ny palitao mangatsiaka dia azo ampiasaina arakaraka ny fepetra miasa.
6.Ny sakana andriamby ny paompy andriamby dia avo lenta tsy fahita firy eto an-tany maharitra planeta-samarium kobalt, ny demagnetization avo indrindra tsy azo ovaina dia mety hahatratra 400-450 ℃, nanome antoka feno ny fifangaroan'ny andriamby tamin'ny fampisehoana azo antoka. Rehefa miasa ara-dalàna izy io, ny fampiraisana andriamby sy ny motera fampidirana dingana telo dia miara-miasa ary manana fahombiazana maharitra. Inona's plus, magnet maharitra dia misy fahamarinan-toerana avo lenta, ary mety hisorohana ny fahasimbana mandritra ny fivorian'ny fiangonana sy ny fivorian'ny rotors na ny paompy miasa amin'ny torateny avo indrindra
7. Mandritra ny fiasana, ny hery axial an'ny paompy dia mandanjalanja ho azy amin'ny alàlan'ny herin'ny hydraulic, ny kapila fanosehana dia mitondra fotsiny ny fanesorana axial eo ho eo rehefa manomboka sy mijanona ny paompy.
Ny paompy andriamby dia afaka manatratra izany raha tsy misy ny famoahana, dia mety ny mamindra rano manimba, manapoizina, mora mirehitra, mipoaka, lafo vidy na mora entona. Ankoatr'izay, ny paompy magnetika dia mety ihany koa amin'ny fampitana hafanana avo, tsiranoka ambany ambany ary ranoka eo ambanin'ny toetran'ny banga.
Previous: Modely API610VS6 Pump TDY
Manaraka: Paompy entiko amin'ny andriamby
Paompy entin'ny andriamby MG
Paompy entin'ny andriamby MMC